Ọkachamara Semalt: Ụzọ Ndị Kasị Mmasị Ndị Na-eme Ihe Ngwá Ọrụ Na-eji Jiri Mmepe Na-eme Ihe
Ịgba egwu bụ ihe iyi egwu na-eche obere ego na nnukwu ụlọ ahịa. N'ezie, nnukwu ụlọ ọrụ yiriMicrosoft, NBC, Twitter, Facebook, Drupal, na ZenDesk esiri na ebe nrụọrụ weebụ ha banye n'ime. Ma ndị omempụ cyber ndị a hà chọrọ kazoo data nkeonwe, mechie PC gị ma ọ bụ weghachite njikwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị, otu ihe ka na-edo anya; ha na-egbochi azụmahịa - c-c.
Artem Abgarian, nke Ọkachamara Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Na-enye Aka, na-enye anyị ohere ịtụle usoro ndị a onye hacker nwere ike iji mee ka ị banye n'ime ebe nrụọrụ weebụ gị.
1. Nsogbu Mgbochi
Mwakpo a na-eme mgbe enwere ntụpọ na SQL Library, SQL database ma ọbụ ọbụ osonwe ya. Ndị ọrụ gị na-emeghe ihe na-agafe dị ka faịlụ ndị kwere ekwe ma amaghị ha, faịlụ nwere iwu zoro ezo (injections). Site na imeya mere, ha na-ekwe ka mbanye anataghị ikike ahụ nweta ohere na-enweghị ikike na nzuzo data dị ka nkọwa kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ, nọmba nchekwa mmadụ,wdg.
2. Ihe Mgbochi Na-agụ Akwụkwọ Egwu
ọgụ XSS mere mgbe a na-eziga faịlụ, ngwa ma ọ bụ URL 'rịọrọ' nawindow windo. Rịba ama na n'oge ọgụ ahụ, ngwá agha (nwere ike ịbụ nke ọ bụla n'ime atọ a kpọtụrụ aha) na-agafe usoro nkwado. N'ihi ya,a na-aghọgbu onye ọrụ ahụ na-eche na ha na-arụ ọrụ na ibe weebụ.
3. Ezigbo Nyocha & Oge Nchịkọta Oge
N'ọnọdụ a, onye na-eme ihe nyocha na-anwa imebi usoro nyocha njirimara na-adịghị ike.Usoro a gunyere okwuntughe njirimara, njigide ids, njikwa isi na kuki ihe nyocha. Ọ bụrụ na e nwere loophole ebe, hackers nwere ike ịnwetaakaụntụ onye ọrụ gị site na ebe dịpụrụ adịpụ mgbe ha na-abanye na iji nzere gị.
Pịajacking (ma ọ bụ UI-Redress Attack) na-eme mgbe hackers jiri otutu, opaquendida iji tọọ onye ọrụ ahụ n'ịpị n'elu oyi akwa n'echeghị ihe ọ bụla. N'okwu a, ihe eji egwu 'haja' na-akụ na nke a pụtaramaka ibe weebụ gị. Dị ka ọmụmaatụ, site n'iji nlezianya jikọta iframes, igbe ederede na ụdị ejiji, onye na-egwu ihe ga-eme ka onye ọrụ ahụ chee naha na-abanye n'ime akaụntụ ha, mana n'eziokwu, nke ahụ bụ ebe a na-adịghị ahụ anya nke onye na-achịkwa ihe kpatara ya.
Ị maara na data ochie cache nke ị chefuola nwere ike ịbịa ma nọrọị? Ọfọn, onye na-egwu egwu nwere ike ịchọpụta nsogbu na ngalaba aha ngalaba nke na-enye ha ohere ịgbanye okporo ụzọ site na ihe nkesa legit na-ejirimkpokọta ma ọ bụ nkesa. Mwakpo ndị a na-emepụta ma gbasasịa onwe ha site na ihe nkesa DNS ọ bụla gaa na nke ọzọ, na-etinye ihe ọ bụla na ụzọ ya.
6. Mmegide Ọchịchị Nlekọta Mmadụ
N'ikpeazụ, nke a anaghị abanye na ya. N'okwu a, ị na-enye nzuzoozi n'ezi okwu na-ekwu karịa nkata weebụ, ozi-e, mgbasa ozi mgbasa ozi maọbụ site na mmekọrịta ọ bụla n'Ịntanet. Otú ọ dị, nke a bụ ebe nsogbu na-abịan'ime; ihe ị chere bụ onye na-ahụ maka ndị ọrụ legit na-eme ka ọ bụrụ ọrụ. Ezi ihe nlereanya ga-abụ "nkwado Microsoft Technical Support".
7. Egwuregwu (ihe agha n'ime agha)
Symlinks bụ faịlụ pụrụ iche nke "na-ezo aka na" njikọ siri ike na-esite na faịlụusoro. N'ebe a, hacker na-atụ aro ọnọdụ symlink dị ka ngwa ahụ ma ọ bụ onye ọrụ ahụ na-enweta na njedebe na-ewere na ha bụịnweta faịlụ ziri ezi. Mgbanwe ndị a na-emebi, na-edegharị, tinye ma ọ bụ gbanwee ikikere faịlụ.
8. Mkpesa Mgbochi Cross-Site
Mwakpo a na - eme mgbe onye ọrụ abanye na akaụntụ ha. A hacker si aọnọdụ dịpụrụ adịpụ nwere ike ijide ohere a iji zigara gị arịrịọ http. Nke a pụtara iji nakọta ozi kuki gị. Ozi kuki aanọgide na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-abanye na ya. Iji nọrọ na nchebe, na-abanye na akaụntụ gị mgbe emere ha.
9. Ihe mgbochi oku imebi
Nke a na - eme adịghị ike na nkesa gị. Ihe na-adịghị mma dị ka akwụkwọ ndekọ ederede,ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ ọdebe nakwa ụdị modul ndị ọzọ na-agba ọsọ na njirimara-njikwa ihe ndabere, malware na edemedeahịrị.
Ajuju a na-ekesa nke agha (abbreviated dị ka DDOS), na-eme mgbe igwema ọ bụ ọrụ nkesa na-agọnahụ gị. Ugbu a mgbe ị na-anọghị n'ịntanetị, ndị na-agba ọsọ hackers na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ọrụ a kapịrị ọnụ. Ebumnuche nkeihe agha a bụ ịkwụsị ma ọ bụ weghaa usoro usoro.